Orinasa Semalt sy ny serivisy
Manana tranonkala ianao, ary azo antoka fa te hampiroborobo ny tranokalanao ianao ary manontany tena hoe inona ny paikady hampiharina na iza no ampifanarahana manokana amin'ny tranokalanao? Aza manahy; nalaminay ny zava-drehetra ho anao.
Eny tokoa, ny tanjon'ny tompona orinasa an-tserasera dia ny fanatsarana ny toerana misy azy ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Ny toeran'ny tranonkala dia raisina ho tsara rehefa mipetraka ao amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana. Ary tsy azo atao izany raha tsy misy paikady SEO.
Noho izany, ao an-tsaina, dia nanangana serivisy tsara indrindra ho an'ny tranokala rehetra i Semalt : SEO (search engine optimization) sy Web Analytics. Ao Addition, Semalt dia manolotra fanentanana roa SEO, toy ny AutoSEO sy FullSEO.
Fa eo anoloan'izany vaovao rehetra izany dia ndao holazaina aminao izahay momba ny Semalt; Inona sy Manao Semalt. Ary zavatra maro hafa momba ny Semalt. Andao!
Niorina tamin'ny volana septambra 2013, Semalt dia orinasa IT maoderina haingana sy haingana. Ny foibeny dia misy ao Kyiv, Ukraine. Amin'ny maha masoivoho nomerika feno anay, dia manolotra mpandraharaha, webmaster, mpandinika ary mpivarotra manam-pahaizana izahay fomba vaovao hampiasa amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny tranonkala mahomby amin'ny karazan-tserasera.
Ny Semalt dia amina ekipa manam-pahaizana manokana momba ny famoronana, talenta, mavitrika ary mandrisika izay nahavita tetikasa IT nahomby maro. Nolavainay nandritra ny folo taona izao ny fahaizantsika ary afaka manamafy tsy misy fisalasalana fa ny tsirairay avy amintsika no tena tompon'ny varotra ataony.
Ny ezaka ataontsika miaraka dia nanangana ny serivisy tranonkala voalohany sy vaovao kokoa. Ary mirehareha ny manolotra izany aminao izahay anio. Noho ny teknolojia sy ny fanampianay dia ahafahanao mahatsapa ny fahafahanao feno amin'ny tranokalanao.
Taorian'ny asa sy famakafakana taona maro dia manana ny fahatakarana feno ny tokony hatao isika, rahoviana ary ahoana. Ny tanjonay dia ny hanampy anao hahatratra haavo vaovao, ao amin'ny Google na amin'ny fiainanao. Miaraha miasa aminay amin'ny fahombiazana azo antoka.
Araka ny hitanao dia tena azo antoka sy vonona ny hiara-miasa aminao izahay amin'ny andro na antoandro!
Ankehitriny, arakaraka ny ahafantaranao bebe kokoa momba Semalt , ndao isika hifindra amin'izay atolotra ho serivisy.
Inona sy Manao Semalt.
Inona no azontsika atao? Entinay amin'ny sehatra manaraka ny orinasanao! Manokatra fantsom-barotra vaovao izahay ary manampy anao handresy ny fifaninanana. Manolotra anao tolotra tsara indrindra ilaina i Semalt amin'ny alàlan'ny fanondroana tsara ny tranonkalanao, izany hoe: SEO sy Analytics.
Noho izany, tokony homarihina fa ny teknolojia SEO no fomba ara-toekarena sy mahomby indrindra hampitomboana ny mpijery sy ny varotra kendrena. Noho izany, Semalt dia manolo-tena amin'ny fanatsarana ny fahitana ny tranokalanao ary mametraka ny tranonkalanao eo amin'ny TOP an'ny Google. Mpitsidika maro kokoa - vola bebe kokoa! Koa avelao hiaraka aminao amin'ny alàlan'ny serivisy i Semalt:
Ahoana ny fomba fiasa search engine optimization?
Toy ny zavatra mety mahatonga anao hahazo vola be dia be ny dingana sarotra ny SEO.
Mazava ho azy fa afaka mikaroka teny fanalahidy ianao ary mamorona tenifototra META optimize SEO mampiasa ny fitaovana maimaim-poana, dia mipetraha ary miandry miandry ny ody. Na izany aza, tsy izany no mahomby ny vokatra SEO tsara.
Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny fanatanterahana izany dia ny fampiasana matihanina matihanina. Na izany aza, tsy hainao raha afaka manome antoka ianao ho fahombiazana tanteraka.
Ny fomba iray hafa, ary angamba ny tsara kokoa ho an'ireo vao tonga vao haingana, dia ny mahita masoivoho iray hanatanteraka SEO ho an'ny orinasanao. Mety hanome fihenam-bidy tsara anatiny sy ivelany izy ireo, zavatra tena ankafizin'i Google.
Miara-miasa amin'ny masoivoho toy izany ianao dia hitarika amin'ny sehatra rehetra amin'ny tena SEO:
Fikarohana (teny) fikarohana: Tsy ho mitovy ny voambolana rehetra. Ny sasany dia tsy tena hiasa amin'ny tranokalanao, fa ny hafa kosa mety miasa tsara. Izany no antony tokony hisafidianana tsara azy ireo.
Optimization ara-teknika: Ity dingana ara-teknika ity dia tsara hoe voaomana ny «tranokala» ho an'ny milina fikarohana. Misy fiatraikany mivantana amin'ny vintana anao hahazoana ny fankasitrahany.
Optimization ivelany: fikajiana ivelany na rohy fananganana. Mikasika ny fahazoana rohy hafa amin'ny tranokalanao. Ny ankamaroan'ny SEO dia manondro azy io ho toy ny lamosina amin'ny paikady SEO, ary toa marina izy ireo (hiverina eo isika).
Fampivoarana ny fanarahana: Manandrama hatrany hanatsarana ny tranokalanao ho an'ireo mpitsidika. Raha tian'izy ireo dia manao toy izany ihany koa ny milina fikarohana.
Amin'izao fotoana izao, ny varotra an-tserasera rehetra dia tokony hahomby amin'ny tranokalan'izy ireo manokana ho an'ny milina fikarohana dia mahatratra na somary latsaka kokoa. Raha toa ka, manahy ny vola miditra aminy sy ny tohin'izy ireo izy ireo.
Ny SEO rehetra dia satria mitondra ny fifamoivoizana tranonkala organik mankany amin'ny tranokalanao ary "mametraka ny fototra" hanamafisana ny fanatrehanao an-tserasera.
Ny tsy fahampian'ny fampahalalana dia mitarika amin'ny lozisialy ho an'ny orinasanao. Mijanona ho fantatra ary mifehy ny orinasanao! Isan'andro dia manome anao data dikan'ny famakafakana momba ny fandrosoanao ianao.
Isan'andro dia manadihady ny toerana misy ny tranonkala izahay ary manara-maso ny fivoaran'izy ireo. Eny tokoa, nanangona ny fampahalalana ho an'ireo mpifaninana aminao i Semalt, mazava ho azy raha manapa-kevitra ny hanara-maso ny tranokalany ianao.
Tsy toy ny tranokala hafa, havaozinay tsy tapaka ny toerana misy anao, manome fotoana tsy manam-paharoa mba hanarahana ny toeran'ny tranokalanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny antoandro ary hahita ny fiovana farany.
Ireo famakafakana rehetra dia atolotra anao amin'ny alàlan'ny tatitra an-tsoratra momba ny an-tsipiriany niova ho endrika PDF izay azonao alaina amin'ny tranokalanao. Ny tatitra dia azo alefa any amin'ny adiresy imailaka voalaza. Manome anao mazava tsara ny fandrosoanao.
Raha ny tokony ho izy dia zava-dehibe ny ady hiadiana an-tampon'ny Google. Na izany aza, tena ilaina ny mitazona ny toerana misy anao hatrany amin'ny farany ambony, satria ny mpiray dia manenjika anao toy ny liona noana. Mba hisorohana anao tsy hiditra amin'ity fandrika ity dia nametrahantsika ny analysana tranonkala.
Eny tokoa, serivisy famakafakana matihanina ho an'ny webmaster izay manokatra ny varavarana amin'ny fotoana vaovao hanaraha-maso ny tsena ny mpitsikera ny tranonkala, hizaha ny toeran'ny mpifaninana sy ny angon-drakitra momba ny fizahan-tany.
Ampandrenesina. Atombohy ny fampiasana ny analytana tranonkala dieny izao!
Ireo mpikaroka dia:
Soso-kevitra momba ny teny fanalahidy: manampy anao izahay hisafidy teny manan-danja ara-barotra mety.
Tantara momba ny laharana: Jereo sy hamakafaka ny toeran'ireo teny fanalahidy rehefa mandeha ny fotoana.
Toeran'ny teny fanalahidy: fanaraha-maso isan'andro ny toerana misy ny tranokalanao ao amin'ny rafitra fikarohana.
Fampandresen-dàlana mifaninana: famakafakana ary hamakafaka ireo toeran'ny mpikaroka ao anaty kaontinao.
Fanaraha-maso ny marinao: Ity fampahalalana an-tserasera ity dia manolotra ny tahan'ny malazao, izay ahafahanao mamolavola politika fiaraha-miasa mahay.
Mpanadihady tranokala: Fandinihana feno ny fanarahanao ny tranokalanao amin'ny fandrosoana ny tranokala sy ny takian'ny indostrian'ny SEO.
Iza amin'ireo fanentanana SEO no atolotry Semalt Offer?
Araka ny efa nambarantsika, Semalt dia manolotra hetsika SEO roa, toy ny AutoSEO sy FullSEO. Aleo holazaina aminao izao ny momba azy ireo!
Raha ny marina dia natao ho an'ny olona te-hampitombo ny varotra an-tserasera raha tsy mbola mahalala azy ny SEO izy ireo, ary tsy te handany vola be nefa tsy mahazo valiny. Avy eo ny fampielezana AutoSEO no fanentanana tsara indrindra ho anao. Fantaro ny antony.
Nahoana ianao no mila AutoSEO?
Ny fanentanana AutoSEO dia efa nanaporofo izany tamin'ny tranokala marobe, koa aza atao fampidinana manokana ny tranokalanao. Jereo ny vokatry ny AutoSEO:
Ny zava-drehetra dia tafiditra ao anatin'ity fanentanana ity, ny AutoSEO dia misy:
Safidy ny teny manan-danja indrindra
Fifandraisana amin'ny tranokala niche
Karoka ao amin'ny tranokala
Ankehitriny, izao no fotoana hanombohana ny optimization SEO sy hanatsarana ny lisitry ny Google amin'ny AutoSEO.
Safidy teny ho an'ny fampiroboroboana SEO
Fanentanana ny fanentanana momba ny fananganana rohy
Ny fanohanan'ny mpitantana manokana
Fampiroboroboana SEO amin'ny toerana sy fiteny rehetra
TOKONY HANOHANA NY RANO FAMPISEHOANA NY TOKONAO HANOMPOANA , ny Semalt dia manana famandrihana 1 taona, 6 volana, 3 volana, ary famandrihana 1 volana ihany koa , satria i Semalt dia mifanaraka amin'ny teti-bola rehetra.
FullSEO , dia fomba iray mandroso hampidirana ny TOP an'ny Google. Eny tokoa, misy hetsika marobe momba ny fanodinana ny anatiny sy ivelany ny tranokalanao, manome valiny tena tsara ao anatin'ny fotoana fohy.
Mba hahatratra ny tampon'ny Google dia mila fotoana sy loharano mila anao ianao. Na eo aza izany dia namolavola paikady fandrosoana SEO efa mandroso izahay ahafahanao mampitombo ny mpihaino, mampifandray ny fifamoivoizana ary ny varotra ao amin'ny tranokalanao amin'ny fotoana fohy indrindra miaraka amin'ny FullSEO: TRY IT NOW!
Noho izany, aza misalasala intsony, ario ny fanentanana feno FullSEO anao ary tongava aty amin'ny TOOS- n'ny Google!
FullSEO dia fanentanana feno sy mahomby hanampiana ny orinasanao hitombo amin'ny fotoana fohy indrindra mety hampitomboana ny mpihaino ny tranokalanao amin'ny sehatra SEO avo kokoa.
Miaraka amin'ny FullSEO, inona no azonao?
Vokatra haingana sy mahomby
Semalt dia manana mpankasitraka an-jatony maro
Hatramin'ny taona 2013, ny hetsika ataontsika rehetra dia natao hanatsarana ny hetsika an-tserasera ho an'ny mpanjifantsika bebe kokoa. Tena mirehareha isika satria tafiditra amin'ny fahombiazany. Jereo eto ny fahafaham-po amin'ny tavan'ny mpanjifantsika amin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolombelona ananany: Fijoroana horonantsary +32, fijoroana ho vavolombelona +146 ary tranga +24.
Azonao atao koa ny iray amin'ireo mpanjifa afa-po
Mazava ho azy fa te ho iray amin'ireo mpanjifa afa-po koa ianao, noho izany dia azo atao. Vonona hiaraka aminao i Semalt avy amin'ny toerana misy anao ankehitriny mankany amin'ny laharam-pahamehananao eo amin'ny top 10 an'ny motera fikarohana Google. Ity no zava-nisy, ohatra, niaraka tamin'Andriamatoa Greta, Tale Jeneralin'ny Zaodrasle, izay nitombo be tokoa tamin'ny serivisy SEO SEO. Ity no nolazainy momba ny zava-niainany niaraka tamin'i Semalt: "Tsara ny serivisy! Afa-po aho, mitombo ny hitsoka organikika; maro ny teny manan-danja ao amin'ny tampony 10. Ivan Konovalov dia mpitantana lehibe, manandrana mafy, nanandrana roa hafa aho taloha. Izy, ary tsy dia tsara loatra izy ireo. »
Tao anatin'ny 5 volana teo amin'ny fampielezan-kevitra SEO, nahavita nihazona fandrosoana izahay ary niantoka fa azon'i Zaodrasle hahazo vahana amin'ny Google TOP-5 sy TOP-3. Tsindrio eto raha hijery ny valiny:
Ka raha liana amin'ireto vokatra ireto ianao dia afaka mitsidika ny tranokalanay ary mahita fampahalalana marobe momba ny mpanjifanay. Hita eto ny raharaha.
Tena zava-dehibe ny manamarika fa Semalt dia orinasa za-draharaha sady manana traikefa SEO mihoatra ny 16 taona misy ekipa manam-pahaizana mihoatra ny 120. Noho izany dia mifandray tsy tapaka amin'ny mpanjifanay isika mba hamaliantsika an-tsakany sy an-davany ireo zavatra ilaina avy amin'izy ireo. Noho izany, ao amin'ny tranokalanay dia afaka hihaona amin'ny ekipanay ianao amin'ny fotoana rehetra.
Tsy misy ny sakana fiteny miaraka amin'i Semalt
Tsy misy ny sakantsakana fitenenana, satria na inona na inona fiteny hitenenanao, dia azo antoka fa hahita fiteny mahazatra miaraka aminao ny mpitantana anay. Rehefa dinihina tokoa, miteny anglisy, frantsay, italiana, tiorka ary fiteny hafa maro koa izahay.
Toe-javatra iray mahaliana momba ny tantara Semalt na Turbo
Tamin'ny taona 2014 dia nifindra tany amin'ny birao vaovao izahay ary nahita izany tao anaty vilany voninkazo tranainy. Nandao azy ny tompon'ny birao teo aloha ka tsy nety nandray. Navelanay tao aminay ny sokatra ary nantsoinay hoe Turbo taty aoriana. Hitanay ny fomba famahanana sy fikolokoloana ireo sokatra, ary ny biby fiompinay vaovao dia nifindra tany amin'ny tranobe be iray. Nanomboka teo dia tonga filamatra isika.